के फेसबुकमा फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पनि उत्पीडन हो ? - Gaule Media ::
Home/रोचक/के फेसबुकमा फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पनि उत्पीडन हो ?
ramsharan२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०१:४९
फेसबुकमा कसैलाई फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पनि कसैलाई प्रताडित गरेको मान्न सकिन्छ ? पाकिस्तानका एक फिल्म निर्माताले यस विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
यो विवाद तब सुरु भयो जब ओस्कार पुरस्कार जितिसकेका पाकिस्तानी फिल्म निर्माता शरमीन ओबेद चिनोयकी बहिनी अस्पताल गइन् । उपचारपश्चात् उनकी बहिनीलाई अस्पतालका एक डाक्टरबाट फ्रेण्ड रिक्वेस्ट आयो । सोही कुरालाई लिएर फिल्म निर्माता शरमीनले रिसको झोँकमा ट्वीट गरे अनि सवाल उठाए कि कुनै डाक्टरले के आफ्नो बिरामीको बारेमा जानकारीहरु फेसबुकमा पोष्ट गर्न सक्दछ ? उनको ट्विटलाई लिएर पाकिस्तानमा फेसबुकमा हुने उत्पीडनको परिभाषालाई लिएर बहस छेडिएको छ ।
डाक्टरको फ्रेण्ड रिक्वेस्टलाई उत्पीडनको आरोप लगाउने ओबेद चिनोयकोे आरोपबाट धेरै मानिस बेखुस भए । उनले विनाकारण धेरै प्रतिक्रिया जनाइरहेको कतिपयको ठहर छ ।
पत्रकार अली मोइन नवाजिशले फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाउनुलाई उत्पीडन भन्नु निकै हास्यास्पद तर्क रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ः यसपछि अब के कसैसँग कलम माग्नुपनि उत्पीडन हुन्छ ? अनि कसैलाई तिन सेकेण्ड भन्दा धेरै हेर्नुपनि उत्पीडन हुन्छ ?
समाचार अनुसार आफ्नी बिरामी बहिनीलाई डाक्टरले फेसबुक रिक्वेष्ट पठाएको विषयमा ओबेदले ट्विट गरेसँगै ती डाक्टरलाई आगा खान विश्वविद्यालय अस्पतालबाट निलम्बन गरेको छ । यस विषयमा अस्पतालले जाँच गरिरहेको बताइएको छ ।
घोडा चढेर बाजा बजाउँदै आइफोन किन्न गए एक युवक
२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०१:५०
२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०४:१८
नेपाललाई तेक्‍वान्दोबाट सातौँ स्वर्ण पदक
१६ मंसिर २०७६, सोमबार १२:४९